On 3/29/2016 (IST)
Magaca buuxa waa wakiil sharafeedka wadanka Sweden oo isla markaa la shaqeyn doona dhamaan wakiilada kale Yurub,taasoo sida la ogyahay wadanka Sweden ay ka mas'uul tahay gabadha la yiraahdo ROODA.
Mr Torstensson wuxuu ka soo jeedaa tuulo la yiraahdo Sävsjö oo 350KM u jirta caasimada wadanka Sweden magaalada Stockholm,arimaha taageerida Somaliland wuxuu si rasmi ah u bilaabay sanadkii 2012,runtii waa shaqsi aad u af-gaaban,laakiin markii uu maqlo arimaha Somaliland meelaha looga hadlo uu dareenkiisa is bedelo.
Hoos ka daawo xiligii lagu dhawaaqay jagada Mr Torstensson iyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ka hadlay shaqsigan reer Sweden.
Markii u horeysay ee aan arko Mr Mikael Torstensson waxay ahayd sanadkii 2015.xili ay socdeen cayaaraha sanadlaha ah ee qowmiyadaha Afrikaanta UK,runtii wuxuu iila muuqday shaqsi macquul ah isla markaana taageerida uu u hayo Somaliland ay tahay mid aad u xoogan
Waxaa kale oo jira in Mr Mikael Torstensson uu leeyahay weji kale oo ka duwan kan taageerida Somaliland,kaasoo ah NACEEYB aad u weyn oo Somaliya uu u qabo,taasoo runtii ah mid shaqsi walba oo dhiiga Somaliga ah ku jira uu ka xumaado.
26 Luulyo 2015 waxaa qarax aad u weyn lala beegsadey Hotelka Jazeera Palace oo ku yaala caasimada Somaliya magaalada Muqdisho,taasoo ay ku naf waayeen dad rayid ah oo aan wax galabsan,isla habeenkaa Mr Mikael Torstensson wuxuu bartiisa SOCIAL MEDIYAHA ku soo qoray arin runtii aad u fool xun oo uu ku dabaqay gooni isu taaga iyo xoriyada Somaliland.
Qoraalkii uu baraha Social Mediyaha uu sooo geliyay,dhowr saacadood ka dib markii masiibada ay ka dhacday Muqdisho
Hadii af-Somali loo bedelo qoraalka Mr Mikael Torstensson wuxuu yiri:
Qarax kale iyo 10 ayaa ku dhimatay. Goorma aduunka uu aqoonsan doonaa wadanka nabada iyo dimoqraadiga ah ee Somaliland oo ay naga xoreyn doonaan wadanka argagixisada ah ee Somaliya.
Mikael Torstensson waxaa qoraalkiisa ka muuqda in uu yahay shaqsi ku faraxsan dhibka soo gaaray dadka masaakiinta ah ee waxba galabsan,isagoo isla markaa doonaya in aduunka uu ka dhaadhiciyo Somaliland ha la siiyo xoriyad kuwan Somaliya ku nool waa argagixisee!.
Dowlada Somaliland cidii ay doonto ayay xil u dhiibi kartaa,laakiin shaqsi dhib ku dhacay Somaliland sidan uga hadlay hadii dowlada Somaliya xil noocuu ahaadaba ay siin lahayd waxaa loo arki lahaa cadaawad dadka walaalaha ah dhexdooda la rabo in la dhigo.
Mr Mikael Torstensson qaab kale oo umaddaha kale wax u dhimin ayuu xoriyada Somaliland ku raadin karaa,ma ahan in dad masaakiin oo aan waxba galabsan dhibka soo gaaray ajendaha uu wato ku fuliyo.
Malaga yaabaa in arintan ay tahay mid ka fakatay oo hal mar keliya dhacday? tabcan laakiin ilaa iyo hada wax raali gelin ah oo uu bixiyay lama arkin.
Dhanka kale in uu u doodo qadiyada Somaliland ma sax baa? tabcan muhiimada ugu weyn waa waxa ay rabaan dadka ku nool Somaliland.
Ugu dambeyn Mr Mikael Torstensson, Somaliya ma ahan wadan ARGAGIXISO ah,hadii aad aamin santahay waxaad dembi ka sii gelaysaa dhamaan dadkii Somaliyeed ee ARGAGIXISADA ay ku gumaaday 30 kii sano ee la soo dhaafay.